महिला व्यवसायिक क्रिकेटका लागि पहल - खेलकुद - साप्ताहिक
धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल) का क्रममा यसका आयोजक सुभाष शाहीसँग सोधिएको थियो, प्रतियोगिताको नाफा–घाटा कति होला ? उक्त प्रश्नमा उनले दिएको जवाफ सामाजिक सञ्जालमा निकै लोकप्रिय भयो । शाहीले भनेका थिए— डीपीएल कुनै व्यवसायिक प्रतियोगिता होइन, त्यसैले यसमा नाफा घाटा हेरिँदैन, यो त अभियान हो । नेपालमा धेरैलाई यो उत्तर चित्त बुझ्यो । नेपाली क्रिकेटलाई मन पराउनेहरूको कुनै कमी छैन । रवि खनाल त्यस्तै अर्का एक पात्र हुन् ।
खनाललाई अर्को सुभाष शाही भन्दा केही फरक पर्दैन । रविसँग साथमा छन्— उनको क्लब युनाइटेड अत्तरिया स्पोर्टस क्लब तथा त्यसका पदाधिकारीहरू । धनगढी नजिकको अर्को सहर हो, अत्तरिया । त्यही अत्तरिया त्यहाँ भएको अत्तरियाकप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताका कारण पछिल्लो साता लगातार समाचारमा रह्यो । पुरुष क्रिकेट नै नभैरहेको स्थितिमा नेपालमा महिला क्रिकेटको त कुनै अस्तित्व नै नभएजस्तो थियो । भए पनि त्यो खालि नाम मात्रको थियो ।
यस्तोमा रवि र उनको क्लबले आँटेको हो— २५ लाख रुपैयाँ बजेट भएको महिला क्रिकेट प्रतियोगिता । त्यो पनि व्यवसायिक रूपमा । यो प्रतियोगिता धेरै अर्थमा नेपाली महिला क्रिकेटका लागि कोसेढुंगा सावित भयो । पहिलोपल्ट महिला खेलाडीले पनि खेलेबापत पारिश्रमिक प्राप्त गरे । पहिलोपल्ट महिला क्रिकेटमा क्लबहरूले सहभागिता जनाए अनि प्रतियोगिताको समाप्तिमा विजेता एवं व्यक्तिगत प्रदर्शन गर्नेहरूले आकर्षक पुरस्कारसमेत प्राप्त गरे ।
नेपालमा महिला क्रिकेटको पछिल्लो प्रतियोगिता सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका क्रममा भएको थियो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री कप । त्यसभन्दा पनि अघि ? त्यो खोज्नैपर्ने हुन्छ । प्रतियोगिता नै नहुनु नेपाली महिला क्रिकेट खेलाडीको सबैभन्दा ठूलो यही हो । यसले प्रतिभाशाली खेलाडी हराउन थालेका छन् । केहीको पलायन पनि सुरु भैसकेको छ । केही खेलाडी त रोजगारीका लागि विदेश पुगिसकेका छन् । यी सबै परिस्थितिबीच कसरी सम्भव भयो त यो प्रतियोगिता ?
आयोजक क्लबका अध्यक्ष पनि रहेका रवि भन्छन्— प्रतियोगिताका लागि प्रशस्त खर्च भएको छ । यसका लागि हामीले धेरै कम मात्र प्रायोजक र अरू पक्षको सहयोगबाट जुटाउन सकेका छौं । त्यसपछि रहेको बाँकी घाटा हामी आफैले बेहोर्नेछौं । हामी त्यसका लागि तयार भएर नै प्रतियोगिता आयोजना गरेका हौं । उनी यस्तै स्थितिमा पनि आउने वर्ष यो प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन प्रेरित छन् । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक थियो— जावलाखेल डिस्टिलरीको उत्पादन रुस्लान भोड्का ।
यो प्रतियोगितामा जम्मा ६ वटा क्लबले सहभागिता जनाए र सुरुमा दुई समूह विभाजित भएर खेल भए । त्यसपछि नकआउट चरण । सहभागी क्लब थिए— एपीएफ, मिलन क्रिकेट एकेडेमी झापा, कञ्चनपुर, कैलाली जिल्ला क्रिकेट एकेडेमी, राइजिङ वुमन काठमाडौं तथा बारा क्रिकेट एकेडेमी । क्लबले खेलबापत खेलाडीहरूलाई पारिश्रमिक दिएको थियो । बाँकी खर्च आयोजक आफैले बेहोरेका थिए अनि ट्वान्टी–२० क्रिकेटको यो प्रतियोगिताको विजेताले प्राप्त गरेको थियो— २ लाख रुपैयाँ ।
उपाधि राइजिङ क्रिकेटलाई
कैलालीको अत्तरियामा सम्पन्न सर्वाधिक धनराशिको अत्तरिया महिला कपको उपाधि राइजिङ क्रिकेट वुमन काठमाडौंले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई १६ रनले पराजित गरी जितेको छ । यो जितसँगै राइजिङ क्रिकेटले २ लाख रुपैयाँ तथा ट्रफी हात पार्‍यो भने एपीएफले उपविजेताबापत १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्‍यो ।
प्रतियोगितामा राइजिङ क्रिकेटबाट सहभागी भारतकी पूजा निमाभाट उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भइन् । यसबापत उनले २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरिन् । त्यसैगरी राइजिङ क्रिकेटकै भारतीय खेलाडी साम्पा मुखर्जीले उत्कृष्ट विकेट किपर, एपीएफकी ज्योति पाण्डे उत्कृष्ट ब्याट्स वुमन तथा सोही क्लबकी सरिता मगरले उत्कृष्ट बलर
घोषित हुँदै १०–१० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे । प्रतियोगितामा सहभागी भारतको राजस्थानका तर्फबाट संसारकै उत्कृष्ट घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता मानिने रणजित ट्रफीमा सहभागिता जनाइसकेकी पूजा निमाभाटले प्रतियोगितापछि प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्— साधन–स्रोतको कमी, नियमित अभ्यास र व्यवसायिकताको अभावका बाबजुद पनि नेपाली खेलाडीहरूमा क्रिकेटप्रति गजबको उत्साह र आत्मविश्वास देखियो । यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।